‘महिलालाई शसक्तिकरण बनाउन सीप सिकाउनु पर्छ’ – Pahilo Page
‘महिलालाई शसक्तिकरण बनाउन सीप सिकाउनु पर्छ’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष नवराज लामिछानेले महिला शसक्तिकरणका लागि उनीहरुको सीप र क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । वडा नं. ६ को महिला लक्षित बजेटबाट गाईडहरमा सञ्चालित खाद्य प्रशोधन तालिमको समापनमा बोल्दै उनले भाषणले मात्र कसैको पनि शसक्तिकरण नुहने बताएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लामिछानेले महिला शसक्तिकारणका लागि उनीहरुको पहिले सीप र क्षमता विकास गरिनुपर्ने बताए ।
‘हामीले शसक्तिकरणका कुरा गर्न लागेको धरै भयो, अव कुराले हुनेवाला छैन, भाषणलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ,’ लामिछानेले भने । अध्यक्ष लामिछानेले वडा नं. ६ का महिलाहरुलाई शसक्तिकरण गर्नका लागि यसबर्ष क्षमता र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
वडा अध्यक्ष लामिछानेले महिलाहरुलाई उत्पादनमा जोड्न सके उनीहरुको आर्थिक शसक्तिकरण हुने बताएका थिए । नबजागरण महिला बचत समूहको आयोजनामा भएको तीन दिने खाद्य प्रशोधन तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्ने अन्य बक्ताहरुले महिलाहरु समूह बनाएर उत्पादनमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समूहका अध्यक्ष आशा जिसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा सदस्यहरु युवा कारार, यमुना परियार, दुजमान भण्डारी बर्षात, पत्रकार नारायण भण्डारी, नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष निशा लामिछाने, प्रशिक्षक रञ्जाना आचार्य, नानीमैयाँ वली, सगरमाथा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष केशवराज पौडेल, तालिमका सहभागी शान्ता चापागाँई, सीता भण्डारी लगायतले मन्तब्य राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन समूहका कोषाध्यक्ष उमा खड्काकाले गरेकी थिइन् । ५० जना महिलाहरु सहभागी तालिममा केराको चिप्स र दालमोट बनाउन सिकाइएको थियो ।।
प्रकाशित मिति : शनिवार, चैत्र २४, २०७४ समय : १५:५४:०६ 160 पटक पढिएको